မကွေးတွင် ကျောက်မီးသွေးတွင်း ပြိုကျ၊ လူရှစ်ဦး ပိတ်မိပြီးနောက် အနည်းဆုံး ငါးဦးသေဆုံး၊ တရ? - Yangon Media Group
ကျောက်မီးသွေးတွင်းပြိုကျမှုကြောင့် လူရှစ်ဦးပိတ်မိနေခဲ့ရာ လက်ရှိအထိ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် ငါးဦးမှာ သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦးပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းဘူးမြို့နယ် ငဖဲ-ရွှေစက်တော်ကား လမ်းဘေး ဆပ်ပြာချောင်းအနီး၊ ကျောက်တစ်လုံးမြေနီကွင်းအနီးရှိ ဟန်ထက်(၁)ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီမှ တူးဖော်လျက်ရှိသည့် ကျောက်မီးသွေးတွင်းတွင် နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ကျောက်မီးသွေးတွင်းနံရံများပြိုကျကာ ကျောက်မီးသွေးတွင်းအတွင်းလူ ရှစ်ဦးပိတ်မိနေခဲ့ပြီး ယင်းနေ့တွင်ပင် နှစ်ဦး၏အလောင်းများကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီး ၂၈ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် နောက်ထပ်အလောင်း နှစ်လောင်းနှင့် ညနေငါးနာရီခွဲတွင်တစ်လောင်း၊ စုစုပေါင်းငါး လောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး သုံးဦးမှာပိတ်မိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ငဖဲမြို့ နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်မောင်လွင်ထံမှ သိရသည်။
”၂၇ ရက် ညဦးပိုင်းက နှစ် လောင်းရတယ်။ ကျန်တဲ့ခြောက် လောင်းကိုဆက်ကယ်တော့ ၂၈ ရက် နံနက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ် နှစ်လောင်းထပ်ရတယ်။ ညနေပိုင်း ၅ နာရီခွဲလောက်မှာတစ်လောင်းထပ်ရတယ်။ အဲဒီအထဲမှာစကား ပြန်တစ်ယောက်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦးစီပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူ ကတော့ကိုယ်တို့ဒေသခံတွေပါ။ ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကတော့ သုံးဦးပါ။ သူတို့ကအောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားတာ။ ဆေးရုံပို့ပြီးတော့အခု ဆိုရင် အေးဆေးဖြစ်သွားပါပြီ။ ကျန်တဲ့လူတွေကိုဆက်ကယ်ဖို့အတွက် တော့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဒါပေ မဲ့ အထဲမှာမြေပြိုတာတွေရှိတော့ နည်းပညာအခက်အခဲရှိနေတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ အသက်ရှင်ဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ ယူဆထားကြ တယ်”ဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်မောင်လွင်က နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူုဒေး သို့ပြောကြားသည်။
ကျောက်မီးသွေးတွင်းပြိုကျ ခဲ့ရခြင်းမှာအနက်ပေ ၁၅ဝ ခန့်မှ ပေ ၃ဝဝ ကြားရှိမြေအောက်လိုဏ် ခေါင်းအတွင်းသို့ကျောက်မီးသွေး တူးရန်အတွက်အလုပ်သမားများ ဆင်းသွားခဲ့စဉ် တွင်းဝမှ ပေ ၃ဝဝ ခန့်ရှိကျောက်မီးသွေးတွင်းထဲသို့ လေမှုတ်သွင်းသည့်စက်အရင်းရှိ မိုးကာစအထူလြေ>ွပန်ပိုက်၏ချုပ် ရိုးများပွင့်ထွက်ပြီး ကျင်းအတွင်းမှ လေများရုတ်တရက်ပြန်လည်ထွက် လာချိန်တွင် အပေါ်နှင့်ဘေးအကာ ကျောက်မီးသွေးတွင်းနံရံများပြိုကျ ခဲ့ပြီး ကျောက်မီးသွေးအတွင်း အလုပ်သမားများပိတ်မိခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါကျောက်မီးသွေးတွင်းသည်ပေ ၈ဝဝ အနက်ရှိပြီးတွင်း တူးဖော်ရာတွင် ၄၅ ဒီဂရီအနေအထားဖြင့် တူးဖော်နေသောတွင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တို့ တွေ့ဆုံ၊ မြန်မာနိုင်??